Ma Jirto Cid Isaga Ku Qasabtay In Uu Halkan Yimaado- Nasser Al-Khelaifi Oo Neymar Jr Si Xun U Diray Iyo Go’aanka Uu Mbappe Ka Qaatay. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 17, 2019 at 17:12 Ma Jirto Cid Isaga Ku Qasabtay In Uu Halkan Yimaado- Nasser Al-Khelaifi Oo Neymar Jr Si Xun U Diray Iyo Go’aanka Uu Mbappe Ka Qaatay.2019-06-17T17:12:52+01:00 CAYAARAHA
Madax waynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi ayaa bixiyay waraysigiisii abid ugu xiisaha badnaa intii uu ahaa maamulka sare ee kooxda PSG, wuxuuna si furan uga hadlay xidigaha ugu muhiimsan kooxdiisa iyo xaalada ay ku sugan yihiin.
Waraysi uu Nasser Al-Khelaifi siiyay France Football oo maanta la baahiyay ayuu kaga hadlay dhibaatada ay kooxdiisu ku qabto Neymar jr iyo go’aanka uu ka qaatay mustaqbalka Kylian Mbappe.
Madax wayne Nasser Al-Khelaifi ayaa si aan gabasho lahayn u duray Neymar jr wuxuuna sheegay in ayna jirin cid ku qasabtay in uu PSG ku soo biiray isla markaana waxa uu cadeeyay in aanu kooxdiisa ku sii hayn doonin xidig aan boqolkiiba boqol kooxda wax u qabanayn.
Hadalka Nasser Al-Khelaifi waxa uu si buuxda u kala saaray xaalada Neymar Jr iyo Kylian Mbappe oo hordhicii waraysigan loo qaatay in ay isku mid yihiin balse waxa uu cadeeyay in Mbappe aanu meelna kooxdiisa uga socon xagaagan balse uu Neymar bixi karo.
Iyada oo aanu qaybtii hore ee waraysigan idiin soo gudbinay waqigan oo kale shalay, waxaanu halkan idiinku haynaa qayb kale oo xiiso badan oo maanta lagu baahiyay France Football oo uu Nasser Al-Khelaifi arimahan kaga hadlay.
Ugu horayn Nasser Al-Khelaifi oo ka hadlaya waxa uu ciyaartoydiisa ka doonayo ayaa yidhi: ” Anigu waxaan doonayaa in ciyaartoydu ay doonayaan in ay wax walba u bixiyaan difaacista sharafta maaliyada oo ay mashruuca ku biiraan”.
Intaas kadib Nasser Al-Khelaifi si gaar ah uga hadlaya Neymar Jr isla markaana hadalka hore gun dhig uga dhiganaya ayaa yidhi: “Waxaan doonayaa in ay ciyaartoydu diyaar u noqdaan in ay wax walba ku bixiyaan difaacista sharafta garankayaga, kuwaas aan doonayn in ay sameeyaan, ama aan fahansayn, waanu kulmi oo aanu wada hadali doonaa”.
Nasser Al-Khelaifi oo Neymar jr si adag uga hadlaya ayaa yidhi: “Dabcan waxaa jira heshiisyo ay tahay in la ixtiraamo, laakiin hadda muhiimadu waa ka go’naansho dhaamystiran oo mashruuca ah. Qofna isaga kumuu qasbin in uu halkan u saxiixay. Ma jirto cid isaga ku soo riixday, waxa uu halkan yimid isaga oo si buuxda u fahansan arinta oo mashruuca la saxiixday”.
Nasser Al Khelaifi oo digniin aan looga baran u diraya xidigaha kooxdiisa ugu magaca wayn ayaa yidhi: “Waxaa iyaga waajib ku ah in ay wax badan qabtaan, in ay shaqo badan qabtaan, iyagu halkan maad uma joogaan. Haddii ayna aragtidan ogolaan, albaabku wuu furan yahay!”.
Madax wayne Nasser Al Khelaifi oo soo bandhigaya in aanu sidii hore ugu dul qaadan doonin dhaqamada aan fiicnayn ee ciyaartoyda kooxdiiwa ugu waa wayn ayaa yidhi: “Anigu intaas in ka badan ma doonayo in aan ku haysto dhaqanka caanimada ah ee xidigaha sare”.
Laakiin Nasser Al Khelaifi oo Kylian Mbappé si ka duwan uga hadlaya ayaa yidhi: “Isagu waxa uu doonayaa in uu ku lug lahaado mashruuca oo uu teamka iyo kooxda la koro, laakiin waxaan isaga u sharaxay in aanu dalban karin masuuliyad. Waxaa waajib kugu ah in aad tagto oo aad hesho, xataa mararka qaar jeex-jeex oo meel kale u bax , ma sugi kartid,oo cadho ayaad kicinaysaa- maadaama oo uu maskax badan yahay, waxaan hubaa in uu fahmay”
Nasser Al Khelaifi oo ka hadlaya mustaqbalka Mbappe ayaa yidhi: “Anigu ma sheegayo in aan boqolkiiba boqol hubo (in aanu baxayn Mbappe), laakiin boqolkiiba 200% ayaan hubaa in uu sii joogayo xili ciyaareedka soo socda. Anigu ma doonayo in aan fasaxo ciyaartoygan aan la rumaysan karin”.
Hadalka Nasser Al Khelaifi ayaa si wayn u kala cad wuxuuna muujiyay in Neymar Jr aanu kooxdiisa ku sii hayn doonin balse aanu sinaba ku fasixi doonin Mbappe.
« Tababare Zidane Iyo Real Madrid Oo La Ogaaday Wakhtiga Kama Dambaysta Ah Ee Ay U Qabsadeen Saxeexa Pogba & Tirada Maalmaha Ka Hadhay.
Egypt’s former president Mohamed Morsi dies: state media »